ကြွယ်ဝသောစပါးရိတ်ရာကာလ | နတ်ကွန်းလမ်းလျှောက်
မီဒိုရီ Single-mindedly ကောင်းသောခံစားရဖြစ်ပါသည်
Munakata Taisha အမျိုးသားရတနာပြပွဲ
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် › Entries tagged with "五穀豊穣"
လောလောဆယ် tag ကို browsing
Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း arrowhead
Haiden ငါတောက်ပအသွင်အပြင်အခါ ... အဝါနုရောင်ရှိသော၏ကိုးကှယျခွငျးနဲ့အဖြူဖြစ်တယ်、" ကျေးဇူးပြု.、သင့်ရဲ့သင့်ရဲ့ဖိနပ်ကချွတ်、ဗိမာန်တော်၌ဖူလူး Shou、မျက်နှာကျက်ပန်းချီကားကိုကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု.。ဇာတ်ကောင်များ၏မျက်စိ၌တည် "。တော်တော်ကဒီမှာရှိ、ငါ၏ထိုကဲ့သို့သောရှိပါသည်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝတ်ပြုရာခန်းမထဲဝငျဖို့ရဖြစ်ပါသည်、သင်ထိုကဲ့သို့အခွင့်အလမ်းအတွက်ဤကဲ့သို့သော ... မဟုတ်တွေ့ဆုံရန်အမှန်တကယ်ခက်ခဲစာရေးမယ်ဆိုရင် Hijoni ကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်。ဒါပေမယ့်ငါကမှေးမှိန်ခဲ့ထင်、တက်အနည်းငယ်မှပြင်ပကနေအလင်းနှင့်သိုးစုများမျက်စိကိုပိုပြီးအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာသည့်အခါမျက်နှာသို့သွယ်ဝိုက်အလင်းရောင်၏ပျော့ပျောင်းသောအလငျး၌、မျက်နှာကျက်ရုပ်ပုံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည် ...
Fushimi မီး-အထောက်အထား Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း
Oyama Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း (Shoto)
Chiyoda Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း
မင်းသား Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း
ဝတ်စုံ Inari ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေ、ကောင်းသောအလိုတော်နေစဉ် ... နှင့်ပြည့်ဝဖို့အလယ်တန်း "Kushiage" တွင်、Ishinabe ရဲ့ဆန်ကိတ်မုန့်နှင့်အ Oyatsu များအတွက် Kusugawa ၏အမှတ်တရပစ္စည်းအပေါ်ထွင်းတစ်ဦးရှိ fox နှင့်အတူ ထောက်. Bun လည်းဝယ် ... သင်မှာရှိသည်! မင်းသား Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း! !
နည်း ... "Inari သူငယ်တန်း"。ဒါကအမြဲငြူစူ Ito က "ကိုသူငယ်တန်း၏ဝုဏ်" ထင်ရဲ့。ဒါပေမယ့်သူငယ်တန်းတံခါး၏ "ဟုနတ်ကွန်း Inari တောင်ကုန်းမှမင်းသား Inari ဘုန်းကြီးကျောင်းချဉ်းကပ်မှုထက်," ထိပ်-လက်ဝဲမြှားရေးသားခဲ့သည်အဖြစ်、အဆိုပါ torii ကလက်ျာဘက်၌ကျောမျက်နှာစာများနှင့် tile ကိုခေါင်မိုးဟန်အနေအထားကိုလည်းမြင်နိုင်သည်ကတည်းက ... ယခုများအတွက်、ညာဘက်。နောက်ကျောနှင့်ကုမ္ပဏီအမှတ်ပစ်မှတ်-ပြုကြနှင့်တံခါးဝကိုအက ... Torii、အဆင့်、ဒါ့အပြင်နတ်ကွန်းကိုကြည့်。အဲဒီမှာသို့သော် ...
ဝတ်စုံ Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း
123 …5next ကို 's Page →
Honkomagome ကောငျးကငျဘုံ Soshinsha
[အပိုထုတ်ဝေ] Kichijoji Komagome (Kichijoji Suwayama Soto)
[အပိုထုတ်ဝေ] မျက်စိအနီရောင် Fudoson (Tendai Minamitanitera)
ရေနတ်ကွန်း (ငါးစျေးကွက်) Yohai ရုံး
ရုံးချုပ် (Kotobuki) Mishima ဘုန်းကြီးကျောင်း
Kagurazaka Wakamiya Hachiman ဘုန်းကြီးကျောင်း
[အပိုထုတ်ဝေ] Zenkunitera (Bishamon ဖောက်သည် '' Kagurazaka)
[အပိုထုတ်ဝေ] ကလေးထိန်း Jizodo
က "ပေါင်းလဒ်" ၏နှလုံးမွေ့လျော်ဖို့မဂ္ဂဇင်း
Anamori Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း
Kojiki နှင့်ဟွန်း Shoki
ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် Kumano Kodo Iseji
Tsudanuma လမ်းမကြီး Walking
တိုင်းပြည်ဘုန်းကြီးကျောင်း Goshuin ခရီးစဉ်ပနျးပှားကိုတို့
ငါ ikiki ပေါ့
အရာအားလုံးမျိုးဆက် ကြွယ်ဝသောစပါးရိတ်ရာကာလ ယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အပြင်အားလုံးနှစ်ဖက်ကနေ အဆောင်လက်ဖွဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဆုတောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသာယာဝပြော အလွန်ကြီးစွာသောရည်မှန်းချက်၏သဘောပေါက် ကမ္ဘာ့ဖလားငြိမ်းချမ်းရေး အဆိုပါစုံတွဲသည်ငွိမျးခမျြး ၏အကြောင်းကလေးက ကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင် ကလေးထိန်း Daigan ပွညျ့စုံပညာသင်နှစ် ဘေးကင်းလုံခြုံပေးပို့ ကြှနျတေျာ့ဇနီးဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကောင်းသော-ရှာဖွေနေ အနိုင်ရ နောက်ကျောကိုအတူတကွ အနိုင်ရမှဆုတောင်းပဌနာ ပွညျ့စုံချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဝိဇ္ဇာတိုးတက်မှုကို 招福 ခရီးသွားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စစ်တိုးတက်မှုဆောင်ခဲ့ ညံ့ဖျင်းသောရေ မှလွဲ. ပင်လယ်ပြင်ဂါးဒီးယန်း စင်ကြယ်သောအဖြူ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် Pemphigus အဆင့်ကိုပိုပြီး နေမကောင်းပြန်လည်နာလန်ထူ ခိုးမှုဖယ်ရှားရေး ပိုမျက်စိအဆင့်အထိ Fukutoku အကငျြ့မွေးဖွား လင်မယာကွာ အိမ်ထောင်ရေး လေကြောင်းလုံခြုံမှု Hakobu Kimu တိုးတက်မှု အသက်ရှည် ပိုကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာ ကာကွယ်ခြင်း
Facebook က, G +
[အပိုထုတ်ဝေ] ကလေးထိန်း Jizodo https://t.co/KJE22gkhL6 https://t.co/6dodR221OF 10:31:14 ညနေဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2018 မှ WordPress.com
Oyama Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း (Shoto) https://t.co/asdCzLY4Ka https://t.co/OQkoLmnTPr 11:46:01 ညနေဖေဖော်ဝါရီလ 03, 2018 မှ WordPress.com
© 2018 နတ်ကွန်းလမ်းလျှောက်